Ukusingqongileyo, uLuntu kunye noLawulo- Uniproma-Xa uKhemistry isebenza
Ukuzinikela kunye nozinzo
Namhlanje 'uxanduva kwezentlalo' sesona sihloko sishushu kwihlabathi liphela. Ukusukela oko yasekwa inkampani ngo-2005, kwi-Uniproma, uxanduva lwabantu nendalo esingqongileyo idlale eyona ndima ibaluleke kakhulu, eyayiyinkxalabo enkulu kumsunguli wenkampani yethu.
Khusela imisebenzi / Ukufunda ubomi bonke / uSapho kunye neKhondo loMsebenzi / usempilweni kwaye ulungele ukuya kumhlala phantsi. Kwi-Uniproma, sibeka ixabiso elithile ebantwini. Abasebenzi bethu ngabona basenzayo kuba inkampani eyomeleleyo, siphathana ngentlonipho, ngoxabiso, kwaye nge umonde. Umthengi wethu ohlukileyos Ukugxila kunye nokukhula kwenkampani yethu kwenziwa kuphela kwesi siseko.
Iimveliso zokonga umbane / Ukupakisha izinto zokusiNgqongileyo / ukuThutha okusebenzayo.
Kithina, khuselaing iimeko zokuphila zendalo kangangoko sinako. Apha sifuna ukwenza igalelo kwindalo esingqongileyo kunye neemveliso zethu.
I-Uniproma inenkqubo yolawulo lwentlalo eyenziweyo ukuqinisekisa ukuthobela iimfuno zomthetho wesizwe nowamazwe aphesheya kunye nokuvelisa ukuphucuka okuqhubekayo kwemisebenzi enxulumene nokusebenza ngokufanelekileyo. Inkampani igcina elubala ngokupheleleyo imisebenzi yayo nabasebenzi. Yandisa kubanikezeli ngeenkonzo kunye namaqabane akhe esithathu inkxalabo yakhe kwezentlalo, ngokukhetha nenkqubo yokubeka iliso ethathela ingqalelo imisebenzi yabo yentlalo.